इण्डियन आइडलमा पवनदीप विजेता, के उनी नेपाली मूलका हुन्? – Dainik Sangalo
इण्डियन आइडलमा पवनदीप विजेता, के उनी नेपाली मूलका हुन्?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ समय: १२:१२:१३
इन्डियन आइडल १२ ग्रान्ड फिनालेमा पवनदीप राजन विजेता भएका छन् । यो सँगै १२ औं सस्करणको इन्डियन आइडल को अन्त्य भएको छ । उनीसँगै अरुणिता कांजीलाल दोस्रो, सयाली काम्बले तेस्रो स्थान, मोहम्मद दानिश चौथो भए ।
नेपाली गीतहरु समेत गाउने पवनदीप नेपाली मूलका हुन्? भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । इन्डियन आइडल १२ का विजेता पवनदीप राजनले उत्कृष्ठ प्रदर्शन गरेका थिए । उनले गितार बजाएर आफ्नो प्रदर्शनको सुरुवात गरे र सुशांत सिंह राजपूत स्टारर केदारनाथको गीत काफिराना गाए । इन्डियन आइडल १२ विजेता पवनदीप राजनले ट्रफी, भव्य कार र रु २५ लाख भारु पाउँछन् ।
फाइनलिस्ट सायली काम्बले इन्डियन आइडल १२ को यस सिजनको विजेता घोषणा हुनुभन्दा पहिले आफ्नो अन्तिम प्रस्तुति दिइन् । गायिका अलका याग्निक एक प्रभावशाली प्रस्तुति दिइरहेकी छिन् उनी पुरानी गायिका लता मंगेशकर लाई सम्झेर गीत गाउँछिन् । आफ्नो भावपूर्ण प्रदर्शन संग शुरू गर्नु भन्दा पहिले, उनले खुलासा गरिन् कि लता मंगेशकर इंडियन आइडल हेर्छिन् र उनी पक्का छिन् कि उनी उनलाई हेरिरहेकी छिन् जब उनी उनको लागी गीत गाइरहेकी छिन् ।
१२ घण्टा लामो फिनाले मा सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​र कियारा आडवाणी जस्ता धेरै अतिथिहरु देखिएका थिए । जो आफ्नो भर्खरै रिलीज भएको फिल्म शेरशाह को एक भाग को रूप मा शो को प्रस्तुति दिए । उनीहरु बाहेक, उदित नारायण, अलका याग्निक, र सुखविन्दर सिंह जस्ता पाहुनाहरु पनि दर्शकहरुलाई आफ्नो भावपूर्ण प्रस्तुति संग मोहित पारे ।
पवनदीप भारत उत्तराखण्डका हुन् । त्यहाँ नेपालीभाषीहरुको बाहुल्यता छ । उनी र उनका बहिनीले पनि धेरै नेपाली गीत गाउने गर्छन् । उनले नेपाललाई माया गर्ने र नेपाल आफ्नो अर्को घर जस्तै लाग्ने बताएका थिए ।
Last Updated on: August 16th, 2021 at 12:12 pm
१४७१ पटक हेरिएको